You Ahịa Intelligent? | Martech Zone
You Ahịa Intelligent?
Satọde, 1 Juun 2013 Thursday, May 30, 2013 Douglas Karr
Enyi, Patrick Gibbons, na ndị otu ya na Ozi Walker tinye ọnụ Nkwupụta 10 banyere ọgụgụ isi ndị ahịa ma raara saịtị, Bụrụ onye nwere ọgụgụ isi, ebe ị nwere ike ịkekọrịta akụkọ gbasara otu ahịa nwere ọgụgụ isi ị bụ.
Ruo ọtụtụ afọ, anyị amụọla banyere mmekọrịta ndị ahịa yana ugbu a, eleghị anya karịa karịa mgbe ọ bụla, ndị ahịa na-aga n'ihu ịgbanwe. Ha na-achọkwu ihe ma ha na-atụ anya na ị ga-amata ha ma nyefee ngwaahịa na ọrụ n'ụdị dabara maka mkpa ha na mkpa ha. Nhọrọ ndị ọzọ dị. Chinggbanwe dị mfe. Lọ ọrụ ndị ị na-ahụtụbeghị dị ka ndị na-asọ mpi nwere ike bụrụ ihe iyi egwu gị ugbu a.
Walker bụ ọkachamara na njide ndị ahịa na atụmatụ uto, na-eji amụma nchịkọta, mbelata teknụzụ, na ndụmọdụ ndị ọkachamara iji nyefee nsonaazụ.
Douglas Karr Saturday, June 1, 2013 Thursday, May 30, 2013
Ọnụ ego data dị ukwuu
Gịnị bụ nku nke gị Marketing Strategy?